mushaTHE WORLDASIA86 ChinaGeneration Road Project, 40 Yekuchengetedza Mamiriyoni evanhu Kubva muhurombo
06 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 86 China, ASIA, THE WORLD, Railway, GENERAL, musoro wenyaya, TURKEY 0
chirongwa chekugadzira chicha ponesa mamirioni avanhu kubva muhurombo
Maererano neongororo yakaburitswa neWorld Bank, chirongwa cheChina ne2013 chakaunzwa neBelt uye Road nzira, 7 mamirioni 600 mamirioni ari munyika dzakanyanyisa, 32 mamirioni vanhu vachabvisa urombo hwakapusa. Iyi danho inozowedzerawo 2,8 kuenda ku9,7 muzana yehuwandu hwekutengeserana hwenyika dziri kutora chikamu. Mukutengeserana kwepasi rose, 1,7 kuenda ku6,2 ichawedzera uye mari yenyika yose ichakwira ne0,7-2,9. Parizvino, nyika dze136 dzakasaina kutora chikamu pachirongwa ichi…
Cumhurbaşkanı Silk Road Economic Belt ”uye“ 2013 .Iyo yakaumbwa panguva yekushanya kweMutungamiri weChina Xi Jinping kuCentral Asia neSouth East Asia muchirimo che1. 6 chave chigadzirwa chakajairika chakagamuchirwa pasirese yenyika.
Iyi danho, umo Xi Jinping anobhadhara hunyanzvi kumhemberero dzemhemberero dzekuChina dze70, yakasimbisawo kuvimba kwakabatana kwezvematongerwo enyika, kubatana kwehupfumi uye hukama hwevanhu nehutsika pakati penyika dzakabatana.
Kubva pakupera kwaChikunguru, 136 yakagamuchira huwandu hwenyika dzakasaina gwaro rekudyidzana neChina mukati merudzi rweGeneration neMugwagwa; huwandu hwemasangano epasi rese hwakawedzera kusvika pa30. Basa iri rakanyorwazve kutsanangurwa kweUnited Nations nguva zhinji pasi pezita reInca Kuvaka kudyidzana kwehunyanzvi hwevanhu ”.
Turkey zvakanaka akaiswa mumwoyo chirongwa
Takatarisana nezvakasiyana-siyana zvinotaurwa nenyika dzeWestern, Belt uye Road kushirikiana, East Africa, yekutanga nzira, iyo Maldives yekutanga bhiri pamusoro pegungwa, Belarus ine yayo inogadzira mota. Kuunzwa kwechitima cheMombasa-Nairobi njanji kwakabatsira 50 pozheni yeKenya kukura kwehupfumi, kugadzira inenge 1,5 chiuru mabasa mudunhu.
Turkey mu yechinangwa sungano wakasainwa pamwe China mu 2015 waibatanidzwa Belt Road Project. Muchirevo chechinyorwa ichi, mabasa eiyo Çanakkale Strait Bridge, 3 Storey Tube Kuyambuka Project, Filyos, andandarlı uye Mersin kuvaka emachiteshi uye Edirne-Kars yakakwirira-kumhanya yechitima nekubatanidza njanji njanji irikuenderera mberi.
Iyo purojekiti ine chinangwa chekubatanidza Asia, Africa neEurope; Izvi zvinosanganisira kudyara kwemabhiriyoni emadhora mukuvaka, kusanganisira migwagwa mikuru, njanji, zvikepe uye migwagwa yekuparadzira magetsi. 21. yezana uye inozivikanwa seimwe yemabasa makuru ebudiriro neBelt uye Road chirongwa; kuvaka nekudyidzana kwekufambisa, kutaurirana parunhare, simba uye zvimwe zvigadzirwa zvematunhu mumatunhu aya, zvikwereti uye mari mikana yemapurojekiti matsva, tsika nekudyidzana kwemitero pakati kumatunhu nekutengeserana pamwe nemikana yekudyara inotarisirwa kuvandudzwa.
Bhanhire uye Road Project 25 / 05 / 2019 Bhanhire Nemugwagwa Mushonga: Turhan akapinda mu International International Forum Forum (ITF) muLeipzig, Germany uye akapindura mibvunzo pari purogiramu. Turhan, Turkey, kuti ITF rinoumbwa akavhiyiwa ari chokufambisa zvekutepfenyura inhengo kubvira, uye rinokoshesa zvikuru musangano, akati. Achiyeuchidza kuti nyaya yenyaya yegore iri ndiyo yekugadzirisa nzira dzekufambisa, Turhan akataura kuti akaita hutano hunokosha mukati mehurukuro yemusangano uye kuti akataura hurukuro pamusoro pekutakura, digitalization uye simba kutendeuka. Turhan akaenderera mberi achiti: "Mugore rekupedzisira re15 munyika yedu, takashandisa mapurojekiti anokosha zvikuru mundima yekutakura.Takaitsanangura izvi, zvichitevedzwa nekufarira kwevanhu vose.
One Belt One Road Project Translate Interests of Chinese vanamuzvinabhizimisi kuna Turkey 01 / 07 / 2019 China mabhiriyoni emadhora njanji chirongwa, iro rakatanga sezvo 'munhu Generation One Way', akashandura pfungwa Chinese vanamuzvinabhizimisi kuna Turkey. Railway chirongwa nokuti Turkey raMwari chete zambuko kuEurope kunoona Chinese vanamuzvinabhizimisi vakatanga kushandisa munzvimbo dzakawanda muna Turkey. mwedzi Last purezidhendi wekambani kuvaka riri vachimhanya 40 zviuru vanhu achiita tsvakurudzo kuti mari muTurkey, Krisimasi akauya Sohõ Istanbul Textile mamaneja. Muna 350 September 500-Chinese muzvinabhizimisi unhu boka, riri kuuya Turkey kuongorora inivhesitimendi mikana. Chinese boka nyanzvi vakauya kuna Turkey, akati mapoka akadaro hazvisi vanofarira mabhiriyoni emadhora muzvirongwa nevasiri mabhizimusi vhoriyamu. Turkey vakawanda kubva mwedzi uyu ...
118 Kubatana kweSungano Yakatinhwa muGeneration uye Road Project 28 / 08 / 2018 118 Kubatana kweChipatendi Chigashiriswa muGeneration uye Road Project: Pakaitika gore, 5 zvibvumirano zvekubatana zvakasayinwa pakati penyika yose ye103 nemasangano enyika uye China maererano ne "Generation and Road". Ning Jizhe, Mutevedzeri weMutungamiri Weboka reBelt uye Road Construction Studies, akaita hurukuro yezvepanhau pamusoro pehurukuro nhasi muBeijing. Kubva pakatangwa kweBelt uye Road, chirongwa che118 chakati kufambira mberi kwakakonzerwa mumabasa akawanda ekushandira pamwe kwemakore. Achiratidza kuti kuvakwa kweSino-Pakistani Economic Corridor iri kuramba ichifamba zvakanaka, Ning vakati iyo kuvaka Sino-Laos, Sino-Thailand neHungary-Serbia soro inogara yakasimba.
Anatolia 'Chizvarwa Chimwe Nzira Imwe' 20 / 04 / 2019 Transport uye Infrastructure Minister Cahit Turhan, "Mumwe Belt One Road Project" pamwe rakatevera nguva, pakuti Turkey yatichawana kuwedzera kukosha nzvimbo kusanganisira mu "Anatolia, kuCaucasus uye Central Asia mativi chokufambisa ari svikiro izwi kusvika vakawanda vari ano hupfumi kukura." akati. Minister Turhan, akati mashoko, 17 achangopfuura makore, Turkey yacho nokukurumidza, ekisipoti vaifarira kugadzirwa uye vaizoramba kuwedzera ayo wezvokutengeserana vhoriyamu. Pakati senga zvekutepfenyura kuti Turkey, Azerbaijan uye Central uye South Asia nharaunda havi kutengeserana Turhan akatsanangura kuti chinonyanya kukosha zvishandiso, vachisimbisa kuti auye inzwi pose pfungwa nhanho dzakatorwa munzvimbo iyi. Turhan, ...
Bhanhire uye Road Initiative 'Win-Win' 23 / 05 / 2019 Transport uye Infrastructure Minister M. Cahit Turhan, New Silk Road, anozivikanwawo sokuti Belt uye Road Girişimi`N, Asia, Europe, Africa uye kunyange South America nokubatana zvinangwa parakatonga kuti aikoshesa sechinhu chinokosha chaizvo kutanga Unyokutanga, inobatanidza zvinopfuura nyika dze65 pasi pose, iri basa guru rinofukidza nzvimbo inenge mamiriyoni ane mamiriyoni makiromita makire uye 40 mabhiriyoni evanhu venyika. Naizvozvo, bilateral, multilateral uye remunharaunda pamwe vachabatsirwa urongwa ichi nokuda nyika 'takunda zvisamumirira' Implementation anonzwisisa kwakakosha. "Iye akati. International Transport Forum anomirira Vashumiri Turkey Turhan (ITF), Germany ...
TCDD Taşımacılık A.Ş. Makorokoto Enda kune General maneja
One Belt One Road Project Translate Interests of Chinese vanamuzvinabhizimisi kuna Turkey
Bhanhire uye Road Initiative 'Win-Win'
Iyo inofadza zvikuru yemapurogiramu achachengetedza Istanbul ndiyo motokari yemotokari!
Metrobus kuponesa Istanbul yakabudiswa muDresden, Germany
Metro, Gaziantep vagari vachaponesa kubva pamatambudziko emigwagwa
Host Tunnels 10 ichachengetedza mari yako gore negore